Ebe asaa kachasị mma na Italy | Akụkọ Njem
The 7 kasị mara mma ebe ke Italy
Mgbe anyị na-eche Italytali anyị na-ejikọ ya na Rom n'otu ntabi anya, ọ bụkwa n'ezie obodo mara mma. Mana enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ. N'ezie naanị 10 ebe dị ole na ole, n'ihi na Italy jupụtara nnukwu akụkụ, ebe na akụkọ ihe mere eme na maa mma obodo, ma ị ga-amalite na ihe, n'ihi ya, anyị na-eme nke a dị oké mkpa ndepụta n'ihi na ị.
Ndị a bụ Ọnọdụ 7 na Italy na anyị kwesịrị ịhụ tupu ihe ọ bụla ọzọ. Anyị nwere ebe nwere ihe ncheta, obodo dị na mmiri, obodo ndị dị n’ụsọ osimiri na ọtụtụ ndị ọzọ. Echefula oke nhọrọ nke ebe a ma ọ bụrụ na ị na-eche ịka mma gị Italiantali, n'ihi na ha niile nwere ihe na-atọ ụtọ nke ga-eme ka anyị nọrọ ma biri n'ebe a.
1 Akụkọ banyere Rome
2 Ihe omimi nke Venice
3 Nkà nke Florence
4 Uche Pisa
5 Nrọ na Cinque Terre
6 Ememe Capri
7 Obodo lie na Pompeii
Ihe anyị ga-ekwu maka Rome nke anyị na-amabeghị, a makwaara dị ka Obodo Ebighị Ebi ' n'ihi na ọ dị ka oge agafebeghị n'ime ya ọtụtụ narị afọ. Ọtụtụ ihe ncheta nke Alaeze Ukwu Rom ka dị, dị ka Colosseum a ma ama, nleta ya kachasị mkpa. Ma na mgbakwunye na nke Colosseum anyị nwere ama Trevi Isi iyi nke na-eme chọrọ, anyị nwere ike ịga na Pantheon nke Agrippa na ya nnukwu dome ma ọ bụ gaa na Roman Forum na-aga azụ na oge.
Ihe omimi nke Venice
Na Venice, otu n'ime obodo kachasị nwee ịhụnanya na ụwa na-echere anyị, yana otu n'ime ihe mbụ, n'ihi na ọ dị na mmiri. Gondola na-aga n’okporo ámá ya na site na ebe amaara amara bu ihe anaghi agha agha. Na Àkwà mmiri Rialto Ọ bụ otu n'ime ndị kacha ochie na-agafe canals, na enweghị mgbagha ọ bụkwa otu n'ime ndị a kacha mara amara, yabụ ịgafe ya bụkwa ihe kwesịrị. N'aka nke ọzọ, echefula ileta San Marcos Square, na-eweta olulu mmiri ma ọ bụrụ na idei mmiri jupụtara. N'ime ya anyị ga-ahụ Ducal Palace a ma ama na Basilica mara mma nke San Marcos. Na ụzọ anyị nwekwara ike ịkwụsị ụfọdụ ụlọ ihe atụ kacha mma nke obodo ahụ nwere ebe ngosi ihe mgbe ochie.
Nkà nke Florence
Florence bụ obodo dị mma maka ndị hụrụ nka n'anya, ọ bụkwa na n'ime ya anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ puku ihe ncheta na ọrụ nke ndị nka dịka Michelangelo ma ọ bụ Giotto. Ọ bụrụ na anyị amalite na Piazza del Duomo anyị ga-anọrịrị na otu n'ime ebe nwere ọtụtụ ihe ncheta ịhụ, ebe ọ bụ Katidral ma ọ bụ Duomo, Campanille na Battistero. Ebe ọzọ ndị ọbịa niile chọrọ ịhụ bụ Ponte Vecchio, ya na ụlọ ya ndị ama ama na ndị omenkà na ụlọ ahịa dị n'ime ya. Otu n'ime akwa mmiri puru iche n'uwa, na akwa nkume kacha ochie na Europe niile.
Pisa abụrụla onye ama ama nādabere Tower, ma nwekwa ihe ncheta nke nwere uzo puru iche, nke Pisan, nke bu ndi Roman nke ndi Pisans dozighariri. Nleta Pisa anaghị ewe ihe karịrị otu ụbọchị, ihe kachasị adọrọ mmasị bụ n'akụkụ ụlọ elu Pisa, nke ị ga-arịgo iji nwee ọ toụ n'echiche ya. Ihe n’akụkụ ya bụ Duomo na Baptisty.
Nrọ na Cinque Terre
Cinque Terre na-bụ mpaghara nwere obodo ise: Vernazza, Corniglia, Monterosso al Mare, Riomaggiore na Manarola. N'ihi ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọbịa, ndị ọchịchị na-eche maka ịchịkwa ndị njem na ibelata ọnụ ọgụgụ nleta kwa afọ. Na Cinque Terre anyị na-achọta obodo ndị mara mma nke dị n'ụsọ oké osimiri nke yiri ka a kwụsịtụrụ ya site na ọnụ ọnụ ugwu, nwere ọtụtụ ụlọ mara mma na-enye ya ọdịdị nrọ. Mana ọ bụkwa ebe bara nnukwu uru bara ụba nwere ọtụtụ ụzọ ụkwụ na-atọ ụtọ.
Capri adịworị na oge ndị Rom n'agwaetiti ka ọ bụrụ ọkọchị nọ na klas nke mbụ, ebe ọ bụ na e nwere foduru nke ụlọ ndị Rom. Na narị afọ nke XNUMX ọ ghọrọ ebe ezumike mara mma ọzọ. Ga Capri na-ahụ otu n'ime ebe ndị ahụ jupụtara na ịma mma na ịdị mma Italiantali. Ebe anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụsọ osimiri ya na ụsọ mmiri ya, na echiche ndị na-arịgo na agwaetiti ahụ.
Obodo lie na Pompeii
Onye ọ bụla ga-ama nke ọma akụkọ Pompeii, obodo ochie ahụ liri ya n'okpuru mgbawa nke Vesuvius, na AD 79. N'ịbụ ndị e liri n'ụzọ dị otú ahụ na mberede, obodo ahụ nọgidere dị ka ọ dị, a na-echekwa ọbụna ọdịdị nke ozu ụfọdụ ndị bi na ya, na-eju anya site na mgbawa ahụ. Obodo a dị n’ebe nchekwa dị mma nke mere na ọ na - eme ka anyị mata etu ha siri bie n’oge ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » The 7 kasị mara mma ebe ke Italy
Canberra, isi obodo Australia